Ahoana no ahafahan'ny Podcasters mivarotra ny volon'izy ireo @IBCShow - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ahoana no ahafahan'ny Podcasters mivarotra ny feon'izy ireo amin'ny famoronana @IBCShow
Ahoana no ahafahan'ny Podcasters mivarotra ny feon'izy ireo amin'ny famoronana @IBCShow
Ny fahaiza-mamorona fotsiny dia tsy toetra ananantsika rehetra. Amin'ny teny avo kokoa dia fototry ny fametrahana ny mombamomba ny olona iray. Misy fomba maro ahafahan'ny olona iray mamorona ny mombamomba azy amin'ny alàlan'ny fahalalany. Ankehitriny miaina ao anatin'ny vanim-potoana maha-teknolojia fanavaozana ara-teknolojia isika, manana fomba ampy hanehoana ny tenantsika sy ny feon-tanana mamorona izay ananantsika rehetra izay efa ho henoina ary mangataka ny ho tena marina toy ny faniriantsika. ampitao amin'ny alàlan'ny marika mety ho izy io. Na manao ahoana na manao ahoana ny filantsika na ny ezaka ataontsika, dia amin'ny alalantsika ny fanoratana, hosodoko, tononkalo, na sinema, ny fomba tena mahomby sy mivelatra izay ahafahantsika manatontosa ny lenta marika lehibe kokoa dia hita ao anatin'ny fampiasana ny podcast.
Ny podcast dia tsy fomba mahomby ho an'ny mpamorona iray haneho an-kalalahana sy hanehoana ny heviny fotsiny, fa fampirisihana lehibe koa izy ireo hanampiana azy ireo hanana tsena bebe kokoa sy hanitatra ny marika izay mahavita ny feony noforonin'izy ireo. Noho ny vanim-potoana ara-teknolojika ara-teknolojika dia lasa mora kokoa amin'ny alàlan'ireo sehatra samihafa toa ny Kat, vatofantsika, Libsyn, Soundcloud, sy ireo safidy maro hafa mahavariana eto izay natao manokana hanampiana mpanakanto iray hampita ny fahaiza-mamoron-dry zareo fa fantany fa mety manana ho lasa marika lehibe. Ankehitriny, na dia mety ho dingana somary tsotra aza ny fametrahana podcast, dia mbola mijanona ny zava-misy fa mba hisy ny fivoaran'ny marika mety hitranga, dia tsy maintsy manana kalitao be ny ao ambadik'ilay mpanakanto aorian'izany mba hahomby.
Na inona na inona lohahevitra tianay hitiavana antsika indrindra dia maniry ny hizara ny eritreretintsika indrindra momba ny lohahevitra indrindra isika, ary mba hahatanteraka izany, dia ilaina ny mitazona azy io ho tsara sy voalamina tsara. Ankehitriny, tsy midika izany fa ny podcaster mamorona dia tsy maintsy manoratra takelaka ary mametraky ny mpihaino izay ezahin'izy ireo hanangana ny fahasosorana amin'ny fanahy izay handroaka azy ireo amin'ny farany. Na izany aza, ny podcaster misy fahazoan-dàlana lehibe dia afaka hahomby amin'ny alàlan'ny kalitaon'izy ireo, ary fomba tsara hianarana momba ny votoaty kalitao izay manao podcast lehibe azo jerena amin'ny fanatrehana IBC 2019.
IBC 2019 dia fampisehoana media, fialamboly ary teknolojia. Ity fihaonambe teknolojia ity dia hotanterahina ny volana septambra 13-19, 2019 any Rai Amsterdam, miaraka amin'ireo mpanatrika 1,700 sy mpanatrika 55,000 izay ahitana mpamorona, mpanapa-kevitra lehibe ary mpanao gazety. Ho an'ny podcaster rehetra mitady hahazo fahalalana bebe kokoa momba ny fomba ahafahany manatsara ny podcast amin'ny fivoaran'ny marika mety hitranga, avy eo ny IBC 2019 dia afaka manampy hanome azy ireo sehatra iray ho azy ireo amin'ny fampisehoana ny marika, hanangana vokatra, mampivoatra ny tambajotran'izy ireo, eo am-panaovan'izy ireo izany. miaraka amin'ireo mpanjifa mety sy mpitarika ny indostria izay mahalala ny dingana rehetra sy ny vato hanamafisana ny fahaiza-mamorona ilaina hanampy azy ireo ary mitombo ny podcast. Ny fanatrehana ny IBC 2019 dia ahafahan'ny mpanakanto mampita ireo hevitra izay noheverin'izy ireo fa nihazakazaka nanodidina ny lohany nandritra ny taon-dasa na roa nolaniana tamin'ny fampijaliana mangina.
Amin'ny alàlan'ny fanatrehana IBC 2019, ny mpamorona rehetra dia ho afaka hiditra ireo mpanao fampirantiana mahatalanjona voatondro hanolorana azy. Marobe amin'ireo Mpampirantiana IBC 2019 ahitana:
GREAT Britain sy Pavilion any avaratra
AWEX - FANAOVANA WALLONIA ARY FIKAMBANANA
The IEEE Broadcast Technology Society dia fikambanana miorina amin'ny mambra. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny sehatra indostrian'ny haino aman-jery sy ny mpiara-miasa. Ny tanjon'izy ireo dia ny fanompoana ny filan'ny mpikambana ho fomba iray hanatsarana ny fahalalinan'izy ireo, ary tanterahan'izy ireo ny iraka amin'ny alàlan'ny fampahafantarana azy ireo ny valim-pikarohana farany sy ny fironana amin'ny indostria, izay afaka manampy amin'ny fanomezana tombony ara-pianarana ho an'ny mpamorona sy ny marika tian'izy ireo hatsangana. Amin'ny fisavana ny BTS amin'ny Hall 2 - 2.A60,Hall 8 - 8.F51, ary ny Partner 'Pavilion, mpamorona maniry dia hanana fidirana amin'ny serivisy mahavariana toy ny fiofanana omen'izy ireo, vaovao momba ny asa sy teknolojia, ny fizotrany ary ny fomba ahafahan'izy ireo manampy azy ireo hitantana tsara ny mpanjifa amin'ny podcast.
Rehefa mikasika ny varotra sy ny fanitarana ilaina dia afaka mampiasa be ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fijerena Ilay Grande-Bretagne sy Pavilion Avaratra ary ny fomba ifantohany amin'ny fanampiana ny olona hisafidy mpiara-miasa tsara indrindra amin'ny teknolojia lehibe indrindra manerantany amin'ny alàlan'ny fampisehoana vokatra, serivisy ary haitao be dia be. Ity tranom-bahiny ity dia tohanan'ny departemanta ho an'ny varotra iraisam-pirenena (DIT), izay manampy ny orinasam-pifandraisana UK miantoka ny fahombiazany amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alalàn'ny fampiasana ny fanondranana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba azon'ny teknikaUK ho loharano mahasoa ny fomba tsara indrindra dia ny fizahana azy roa www.techuk.org ary www.great.gov.uk/international/. Izy ireo dia ho ao Hall 5 - 5.B48, Hall 8 - 8.B38, Hall 10 - 10.A42.
The AWEX-Wallonia Export And Investment Agency no loham-pampandrosoana sy fitantanana ny fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena ao Wallonia. Manokana ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola avy any ivelany, ny fampiroboroboana ny asa soa sy ny fampiroboroboana ny fampahalalam-baovao ho an'ny orinasam-pifandraisana iraisam-pirenena sy ny Walloon dia manompo bebe kokoa amin'ny fanomezana ny fahaiza-manao momba ny kalitao amin'ny resaka fampiroboroboana, ny fahatsinjovana ary fampahafantarana ireo mpampiasa vola mety. Ity dia afaka miasa ho iray amin'ireo safidy maro ho an'ny mpamorona handinika bebe kokoa ny fomba ahafahan'izy ireo mivoatra sy hanitatra eo amin'ny marika ny feon'izy ireo amin'ny farany. Awex no hatao Hall 10 - 10.D31.
Miaraka amin'ireo Pavilions voalaza etsy aloha, ho hitan'ny mpamorona ihany koa ny Beijing Pavilion izay ho tanterahana Hall 3 - 3.A21, ary ny Korea Pavilion in Hall 2 - 2.A31. Raha mila fampahalalana tsara kokoa momba ny fomba ahafahan'ny mpamorona fahazoana fahalalana tsara kokoa momba ny fomba fampitana mahomby amin'ny fomba mahomby amin'ny feon'izy ireo amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fanavaozana podcast, dia afaka mitsidika show.ibc.org mba hanombohan-doha tsara.
fampitana injeniera fampitana Engineering Digital Nirvana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor IBC fanaraha-maso ny haino aman-jery Kat Show podcasting Ny Fandikàna Seho fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC Ultra HD Forum Video injeniera	2019-08-02
Previous: GatesAir dia manambatra horonantsary amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny IP ao amin'ny Platform fitaterana Intraplex® Ascent